आफूमाथि बम आक्रमण भएपछि शेरधनले के भने ? - Dainik Nepal
आफूमाथि बम आक्रमण भएपछि शेरधनले के भने ?
दैनिक नेपाल २०७४ कार्तिक २८ गते १७:४१
काठमाडौँ, २८ कात्तिक । भोजपुर क्षेत्र नम्बर २ मा चुनावी प्रचारका क्रममा रहेका नेकपा (एमाले)का पोलिटव्युरो सदस्य तथा पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईमाथि मंगलबार आक्रमण भएको छ । आफ्नो क्षेत्रमा चुनावी प्रचारप्रसार गरिरहेका राईमाथि बम प्रहार गरी आक्रमण गरिएको हो ।
बम आक्रमणमा सकुसल रहेका राईले आफूलाई मार्ने योजनाले आक्रमण गरिएको प्रतिकृया दिएका छन् । ‘सुनियोजित रुपमा बम आक्रमण गरिएको छ’ उनले भने, ‘मेरो हत्या गर्ने योजनाका साथ बम हानिएको हो ।’ घटनालाई आफूहरुले गम्भीर रुपमा लिएको उनले बताएका छन् । उनले घटनामा संलग्नहरुलाई कारवाहीको माग समेत गरेका छन् ।
राई भोजपुर क्षेत्र न.२ बाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् । उनी भोजपुर सदरमुकामबाट टेम्के मैयुम गाउँपालिकाको चुनावी सभामा जादै गर्दा मंगलबार बिहान बम प्रहार गरिएको हो । बम प्रहारबाट उनी चढेको बा १५ ज ५६०८ नम्बरको सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ ।